Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo Malaga Yaabaa Inay U Ciyaaraan Horyaalka Belarus Waa Sida Uu Ku Doodaayo Alexander Hleb? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqaan Belarus si ay u helaan xifiltan kubada cagta ka dib markii cudurka faafa ee coronavirus hakad galiyey kubada cagta waana sida uu ku kaftamay xiddigii hore ee Arsenal iyo Barcelona Alexander Hleb.
COVID-19 wuxuu carqaladeeyey isboortiga adduunka oo dhan, iyadoo Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga & Ligue 1 dib loo dhigay, halka Euro 2020 iyo Copa America 2020 dib loo riixay sannad.
Si kastaba ha noqotee, waa ganacsi sidii caadiga ahayd Belarus halkaasi oo xilli ciyaareedkii Belarus Premier League uu ka bilaabmay Khamiista iyadoo taageerayaashu ay ka soo qeybgaleen.
Belarusian Hleb wuxuu isku dayay inuu fududeeyo xaalada markii uu calanka dalkiisa u calaamadeeyay inay suurtogal tahay inuu u safto xiddiga Barcelona ee Messi iyo xiddigga Juventus ee Ronaldo.
“Adduunyada oo dhan ayaa hadda daawata horyaalnimada Belarusiya. Qof walba waa inuu aadaa telefishankiisa oo uu na daawadaa,” ayuu Hleb u sheegay The Sun.
“Markii NHL ay xirtay xilli ciyaareedka, ciyaartoy badan oo ciyaarta ciyaarta barafka ayaa u aaday Russia si ay u ciyaaraan. Malaha waxaa laga yaabaa in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ay imaan karaan horyaalnimada Belarus si ay u sii socdaan. Ma ogtahay?
“Waa meesha kaliya ee Yurub ee aad kubad ku ciyaari karto. Ugu yaraan markaa dadka Belarus waa ay ku farxi doonaan.”
Magaalada Belarus, waxaa jiray ugu yaraan 81 kiis oo ah coronavirus laakiin ma jirin wax dhimasho ah, Caalami ahaan, COVID-19 waxay dishay 16.500 oo qof in kabadan 378,900 xaaladood.
Hleb wuxuu intaa ku daray “Coronavirus wuxuu xidhay Champions League iyo Europa League. Tani waa fiican tahay, maxaa yeelay waa inaad isku daydaa oo aad joojisid. UEFA waxay sameysay wax sax ah.
“Laakiin Belarus, waa sida qofna aan dan ka lahayn. Waa wax cajiib ah. Waxaa laga yaabaa hal toddobaad ama laba toddobaad inaan halkaan ku joogsan doonno. Waxaa laga yaabaa in Madaxweynaheennu uu kaliya sugayo inuu arko waxa ku dhaca viruska.
Qof walba oo halkan jooga waa ogyahay waxa ku dhacay Italy iyo Spain. Ma ahan wax fiican.
“Laakiin dalkeenna, dadka ku jira maamulka madaxweynaha ayaa rumeysan inaysan ahayn wax xad-dhaaf ah sida ay wararku sheegayaan.
Dad badan oo dhalinyaro iyo arday ah ayaa halkan u haysta sidan oo kale Aniga waxaan ilaaliyaa qoyskayga Laakiin markii aan baxo, jidadka iyo makhaayadaha ayaa wali mashquul ku ah.